जासुससँग भेटेको सूचना समयमै नदिने, अनि अहिले पुरपुरोमा हात राखेर हुन्छ त प्रधानमन्त्रीज्यू ? - Sidha News
जासुससँग भेटेको सूचना समयमै नदिने, अनि अहिले पुरपुरोमा हात राखेर हुन्छ त प्रधानमन्त्रीज्यू ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलबीच भएको छलफलमा भएको छलफलका विषयवस्तुको सूचना सममै नदिँदा प्रधानमन्त्री ओलीको ठूलो आलोचना भइरहेको छ।
उक्त छलफलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत रहेको र छलफलका विषय परराष्ट्रका प्रतिनिधिलेसमेत टिपोट गरेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरे। तर त्यही कुरा समय मै दिएको भए प्रधानमन्त्री ओलीको यत्रो आलोचना हुने थिएन।
ओलीलाई ड्यामेज गर्ने तत्वले एकपछि अर्को सूचना सम्प्रेषण गर्दा पनि प्रधानमन्त्री निकटमा व्यक्तिहरुबाट सही र भएका सूचना समय मै सम्प्रेषण हुन नसक्दा ओलीलाई ड्यामेज गर्ने तत्व सफल भएको छ। के लोभले गर्दा सही सूचना समय मै दिन सकिएन? सही सूचना समय मै नदिने अनि अहिले आएर पुरपुरोमा हात लगाएर हुन्छ त प्रधानमन्त्रीज्यू!
सबैभन्दा बढी चासोको विषय भनेको खुफिया एजेन्सीका प्रमुखसँग देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले झण्डै तीन घण्टासम्म गरेको भेटवार्ताले रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेपाल भ्रमण झन रमस्यमयी बनाएको छ।
सर्बत्र आलोचना भएपछि सरकारी पक्षले गोयल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दूतका रुपमा नेपाल आएका र उनीसँग प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग नेपालको अडान राखेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छवि पछिल्लो समय राष्ट्रवादी नेताको रुपमा रहेको छ। भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध स्पष्ट अडानसहित उभिएका ओलीले पछिल्लो समयमा भारतले अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्दासम्म राष्ट्रवादी नेताको रुपमा उनको कद झन् बढेको थियो।